Izindaba - Yikuphi Okushukumisela Ama-Alarm Pad Pad
1.Ukushayela ikhompyutha ngokushesha:
Igama elibomvu elithi "ngicela uhlole ama-brake pads" lizovela ngasohlangothini lwe-alamu jikelele. Bese kuba nesithonjana, okuyindilinga ezungezwe ngabakaki abambalwa abadiliziwe. Ngokuvamile, kukhombisa ukuthi isondele kumkhawulo futhi idinga ukushintshwa ngokushesha.
2. Iphedi yamabhuleki iza nesikhumbuzi seshidi lesixwayiso:
Amapayipi amabhuleki ezinye zezimoto ezindala axhumene nekhompyutha yohambo, kepha kufakwa isiqeshana sensimbi esincane esingavusa i-alamu emapayipini amabhuleki. Lapho okokusebenza kokungqubuzana kugugile, idrayivu yebhuleki akuyona iphedi yamabhuleki, kepha ipuleti lensimbi elincane le-alamu. Ngalesi sikhathi, imoto izokhipha umsindo onzima "wokukhala" phakathi kwezinsimbi, okuwuphawu lokufaka esikhundleni samaphakethe amabhuleki.
3. Indlela elula yokuzihlola nsuku zonke:
Hlola ukuthi ngabe amabhuleki amabhuleki nama-brake discs mancane yini. Ungasebenzisa i-flashlight encane ukubuka nokuhlola. Lapho ukuhlolwa kuthola ukuthi impahla emnyama yokushayisana kwamapayipi wamabhuleki isizophela, futhi ubukhulu bungaphansi kuka-5 mm, kufanele ucabange ukukufaka.
4. Car uzizwe:
Uma unolwazi oluningi, ungazizwa ukuthi amabhuleki athambile uma amapayipi wamabhuleki engekho. Lokhu kuncike olwazini lwakho lokushayela iminyaka eminingi.
Uma ushintsha iphedi yamabhuleki, umphumela wama-braking ngokuqinisekile awusafani nakudala. Uzozwa ukuthi ibhuleki lithambile. Ngalesi sikhathi, kufanele unyathele ukubopha ukuze uqede igebe eliphakathi kwephedi nediski yamabhuleki. Ngaphezu kwalokho, umphumela omuhle we-braking ungatholakala kuphela ngemuva kokugijima ku-200 km. Amapayipi wamabhuleki asanda kushintshwa kufanele aqhutshwe ngokucophelela futhi anake ukungayilandeli kakhulu imoto.